तराईमा तातो हावा चल्न थाल्याे , 'लु'बाट बच्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह स्पेसखबर
संस्कृति र जीवन होम तथा यज्ञको धार्मिक र वैज्ञानिक महत्व एक अनुसन्धानबाट हवन गरिएको स्थानमा आधा घंटा मात्र बस्दा पनि, हवन गर्दा निस्किएको धुँवा शरीरमा सम्पर्कमा आउनासाथ टाइफाइड फ़ैलाउने जीवाणु तत्काल नष्ट भएको पाईयो ।
स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण सुस्त गतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार ३ सय ९० स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। गत आवमा १ हजार २ सय स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण ...
नर्सिङ संघकाे चुनाव आज पेसागत समूहबाट अध्यक्ष पदका प्रत्यासी मुना राना थापाले आफूले युवा नर्सहरूलाई समेट्ने भन्दै आफ्नो समूहमा युवा नर्सलाई प्राथमिकता दिएको बताइन्।
अस्थायी साधनमा भन्दा गर्भपतनमा आकर्षण पर्वतमा गत वर्षमा ९ सय ७२ महिलाले गर्भपतन गराएका छन् । जिल्ला अस्पताललगायत सुरक्षित गर्भपतन गराउन सूचीकृत जिल्लाका २६ स्वास्थ्य संस्थामा उनीहरुले यो सेवा लिएका हुन् ।
नरैनापुरमा ‘झोले चिकित्सक’ ! स्वास्थ्यचौकीमा चिकित्सक नहुनु र भए पनि उपचारका लागि चाहिने प्रविधि र औषधि अभाव हुँदा गाउँमा ‘झोले चिकित्सक’को दबदबा कायम छ ।
यस्ता छन् सुन्तला खानुका फाइदा अब सुन्तलाको सिजन सुरु भएको छ । स्वादका हिसाबले सुन्तला निकै मीठो फल हो । यो स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तिकै फलदायी मानिन्छ ।
कंगोमा दादुराको महामारी, करिब ५ हजारको मृत्यु कंगोका सबै प्रान्तमा दादुराको महामारी फैलिएको बताइएको छ । महामारीपछि सन् २०१९ मा करिब ५ हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ।
पत्नीले धोका त दिइरहेकी छैनन् ? पतिपत्नीको सम्बन्ध सबैभन्दा उत्तम र पवित्र मानिन्छ । तर, कहिले–काहीं भने पतिपत्नीबीच अविश्वस उत्पन्न हुँदा सम्बन्धमै दरार आउँछ ।
२२ हजार विद्यार्थीले लिए सेवा काभ्रेका ७ स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयका करिब २२ हजार ६ विद्यार्थीले इएर केयर नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा कानको उपचार र त्यसबाट हुनसक्ने सम्भावित समस्याबाट मुक्त हुने विषयमा उपचार ...
उपत्यकामा रगत अभाव, दैनिक साढे २०० पिन्ट माग उपत्यकामा रगत अभाव भएपछि बिरामीलाई समस्या भएको छ। रगत अभाव हुँदा दुर्घटना, रक्त श्राव, प्रसूति, मिर्गौला, थालसेमिया, हेमोफिलियाका बिरामीको उपचार प्रभावित भएको छ।
सफल जीवन कसरी तय गर्ने ? जीवनमा कसरी सफलता प्राप्त गर्ने ? हामीलाई सधैं यही प्रश्नले लखेटिरहेको हुन्छ । सफलता पाउन, जीवन खुसी तुल्याउन त्यहीअनुरुपको लगाव, श्रम आवश्यक हुन्छ । सफलताका लागि लक्ष्य बनाउनुपर्छ साथै ...
वालवालिकालाई दिइने ४७ लाख खोपको मात्रा खेर स्वास्थ्य सेवा विभागले निःशुल्क रुपमा बालबालिकालाई उपलब्ध गराउँदै आएको खोप खेर गएपनि प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन।
तेस्रो कलेजो प्रत्यारोपण सफल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा गरिएको कलेजो प्रत्यारोपण कार्यले सफलता प्राप्त गरेको छ ।